နီစံ (အနီ)၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
နီစံ (အနီ)'s Apps
နီစံ (အနီ)'s Likes
နီစံ (အနီ)'s ၏မိတ်ဆွေများ
နီစံ (အနီ)'s Groups
နီစံ (အနီ)'s ၏ဓါတ်ပုံများ
Red Ribbon From ကလေးတို.ဆရာမ Red Ribbon From ♣တောသူမလေး♣ Red Ribbon From Peaceangel
""**သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ******
ပိဋကတ်(၃)ပုံ မြန်မာပြန် အတွဲ၁ ဒေါင်းရန်
မိလိန္ဒပဥှာ စာအုပ် ဖတ်၇န်
၀ိနည်း ပိဋက Mp3
သုတ္တန် ပိဋက Mp3
အဘိဓမ္မာ ပိဋက Mp3
Listen or download 11-Doe Ba Mar Thi Chinn for free on Prostopleer
နီစံ (အနီ)'s Blog
ဒီဘလော့ကို မေ 6, 2012 တွင်8:12pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments2Likes
ဓမ္မ မှတ်စု (၃)
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 29, 2012 တွင်7:47pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 22, 2012 တွင်5:15am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ဓမ္မ မှတ်စု (၂)
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 21, 2012 တွင်6:43pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။6Comments2Likes
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 20, 2012 တွင်10:35pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment2Likes
ဓမ္မ မှတ်စု (၁)
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 18, 2012 တွင်7:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 16, 2012 တွင်7:38pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ဒီဘလော့ကှိုဧပြီ 3, 2012 တွင်5:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို မတ် 23, 2012 တွင်5:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
စိတ် (၈၉) ပါး အကျဉ်း
ဒီဘလော့ကို မတ် 3, 2012 တွင်5:03am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 16, 2012 တွင်12:08am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments0Likes
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဖြစ်တော်စဉ် ထေရုပ္ပတ္တိ. အပိုင်း ၄
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 10, 2012 တွင်6:51am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
အရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ ၏ တရားတော်များ
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 10, 2012 တွင်6:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 16 Comments 12 Likes
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2012 တွင်10:03pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 4, 2012 တွင်6:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments 1 Like
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဖြစ်တော်စဉ် ထေရုပ္ပတ္တိ.၃
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 3, 2012 တွင်7:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဖြစ်တော်စဉ် ထေရုပ္ပတ္တိ. အပိုင်း၂
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 2, 2012 တွင်5:30am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တသာရာဘိဝံသ ဖြစ်တော်စဉ် ထေရုပ္ပတ္တိ. အပိုင်း ၁
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 1, 2012 တွင်8:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments3Likes
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 1, 2012 တွင်7:00am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments0Likes
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 31, 2012 တွင်10:39pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 11 Comments2Likes
နီစံ (အနီ)'s Discussions
တရား ရိပ်သာ ကဏ္ဍ
Started this discussion. Last reply by နောင်လတ်(မန်း) Apr 11, 2014. 17 Replies9Likes
Started this discussion. Last reply by tin aung bo Feb 5, 2015. 45 Replies 11 Likes
Started this discussion. Last reply by ကိုဉာဏ Jun 25, 2015. 155 Replies 19 Likes
မြန်မာတို့၏ မှားယွင်းနေသော အယူသည်းမှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးကြမယ်
Started this discussion. Last reply by အောင်မျိုးထက် Jan 25, 2014. 136 Replies7Likes
နာကြားလိုသော တရားတော်များ တောင်းဆိုရန် နေရာ
Started this discussion. Last reply by နီစံ (အနီ) Feb 5, 2012. 31 Replies2Likes
12:00pm အချိန်အောက်တိုဘာ 21, 2014, တွင် Hnin Si မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အကူအညီတောင်းချင်လို့ပါ။ အဘိဓမ္မာတရားတော် ဆိုတာ ကို ရှင်းပြပေးပါလား၊ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီအကြောင်း ဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲပြောပြပေးပါလား ။ ကလေးတွေ ကိုသင်ရမည့်စာထဲမှာ ပါလာလို့ ၊ မရှင်းပြတတ်လို့ပါ။
10:51pm အချိန်သြဂုတ် 25, 2013, တွင် ကိုကျော်သန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေရေ မင်္ဂလာ ဒါလေကိုတတ်အာသလောက် အကြောင်ပြန်ပေးပါ
၁ ...ဖြစ်ပျက်မြင် ဖြစ်ပျက်မုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံးတာနှင့် အမြင်ငြိမ်း အနေအေးခြင် နှင့် ၂.. .ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက် မှသည် မဖြစ်မပျက် ထွက်သွားခြင်း ဖြစ်ပျက် စီတ်စီတ်မြင်ရာမှ ဖြစ်ပျက်ရပ် သွားခြင် အမြင်ငြီမ်း အနေအေးခြင့့် မှတ်ချက် ငြီးငွေမုန်းခြင်းမပါ .....၃... ဒီ နှစ်ချက် ကွာခြာချက် ၇ှိသည်ဟု မြင်မီပါတယ် ဘယ်မက်က ဘယ်လိုကွာခြားနေသည်ကို ဘယ်အတိုင်တာနှင့် ဘယ်လောက်ထိ ဘယ်ဟာ ဘယ်လို ကွာခြားသည်ကို ထင်ရှား ရှင်လင်းပေးကြပါရန် ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ လေးစားစ္စာဖြင့် ရှင်လင်းပေးကြပါရန် လေးစာစ္စာဖြင့်
4:06pm အချိန်ဇွန် 13, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး အနီရေ အလှူငွေကျပ် - ၇ သောင်း ကို ဒီနေ့ ဆက်သွယ်လို့ သွားရောက်ထုတ်ယူပြီးပါပြီ..။ အလှူရှင်အမည်ကို မနီနီစံ ၊ မနီလာဦး လို့ ရေးထားလိုက်တယ်။ မဟုတ်ရင်လဲ ပြန်ပြောပါ ညီမ။ အစစအဆင်ပြေပါစေ....။ ကျန်းမာရေးကိုလဲ ဂရုစိုက်ပါ..။
5:33pm အချိန်မတ် 5, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး အနီ မင်္ဂလာပါ ....
8:44pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 2, 2012, တွင် လွမ်းဧကရီ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
12:55pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 29, 2012, တွင် wai mon မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အနီရေ အမလာလည်ပါတယ်နော်။အနီ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ဆထက်တပိုး
5:38pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 28, 2012, တွင် ကိုကျော်သန်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
သိပေးပါ အမြင်မှားမူ့ နင့်မနေနဲ
12:46pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 28, 2012, တွင် မင်းသား(No.9) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:52pm အချိန်နိုဝင်ဘာ 27, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမရေ သတိတရနဲ့ အလည်လာသွားပါတယ်..။ ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစေကြောင်း ဆုမွန်းတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ...။
5:57am အချိန်နိုဝင်ဘာ 15, 2012, တွင် သက်သက် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။